Ny MacBook 12 "voaverina amin'ny laoniny dia hita ao amin'ny tranokalan'ny Apple amerikana | Avy any Mac aho
Ny MacBook 12 restored naverina amin'ny laoniny dia hita ao amin'ny tranokalan'ny Apple an'ny Amerikana
Jordi Gimenez | | MacBook
Volana vitsivitsy lasa izay dia niresaka momba izany tao amin'ny bilaogy izahay. Tsy natombok'i Apple tao amin'ny tranokala ofisialiny ilay MacBook 12-inch namerina azy io ary toa hafahafa taminay izany satria efa an-tsena nandritra ny herintaona izy ireo. Ankehitriny ianao dia afaka manomboka mividy ireo maodely roa misy ao amin'ny tranokalan'ny Apple any Etazonia ary azo antoka fa ho tonga amin'ny sisa amin'ireo fivarotana an-tserasera an'ny orinasa izy ireo.
Mazava ho azy, ireo Macs ireo dia manana vidiny lafo na dia ao amin'ilay faritra namboarina na namboarina ihany aza, saingy ho mora vidy kokoa izy ireo noho ny hoe mividy vaovao azy ireo isika. Efa nanazava ny tombony sy fatiantoka an'ity karazana fividianana ity amin'ny fotoana samihafa isika, momba izany vokatra namboarin'i Apple na namboarina indray izay manome antoka iray taona anay ihany koa, miaraka amin'ny vidiny ambanin'ny RRP mahazatra.
Ny MacBook 12-inch vaovao hitantsika ao anaty lisitra nohavaozina dia manana vidiny $ 1.489 farafaharatsiny amin'ireto farany: 8GB amin'ny 1600MHz LPDDR3, 512GB PCIe, fakan-tsary 480p FaceTime ary sary Intel HD Graphics 5300. hitantsika ao amin'ireto ekipa ireto dia tsy azon'ilay mpampiasa ovaina, ka azonao atao ny mahita ny maodely sy ny loko tadiavinao na tsia, saingy tsy azonao atao ny manefy azy araka ny itiavanao azy. Ny vidiny amin'ny raharaha Etazonia dia manampy fihenam-bidy hatramin'ny 240 dolara amin'ny vidiny ofisialy.
Azoko lazaina fa tonga miaraka amina boaty hafa ireo vokatra ireo noho ilay azontsika rehefa mividy ilay vokatra vaovao, misy mitovy, charger, tariby, torolàlana sns, fa farito eo aloha fa vokatra nohavaozina / nohavaozina. Amin'ny raharahan'i Espana dia very ny taona faharoa amin'ny antoka ofisialy, saingy anjaran'ny mpampiasa tsirairay no mijery na manonitra antsika amin'ny fividianana na tsia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » MacBook » Ny MacBook 12 restored naverina amin'ny laoniny dia hita ao amin'ny tranokalan'ny Apple an'ny Amerikana
Raha mandà i Apple, Microsoft dia mamorona kinova manokana an'ny Windows 10 miaraka amina varavarana ambadika
Ny valiny ara-bola an'ny Apple amin'ity Q2 ity ho an'ny 25 aprily